Amaqhinga omele uwazi ngaphambi kokwenza intengiso yakho yokuqala kwi-Instagram | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJudit Murcia | | I intanethi, Ezahlukeneyo
I-Instagram ngokungathandabuzekiyo yenye yeendlela zonxibelelwano okubaluleke ngakumbi ngoku. Eli qonga likhule ngokukhawuleza kakhulu ukufikelela ngaphezulu Izigidi ezili-800 zabasebenzisi abasebenzayo. Kungenxa yesi sizathu le nto iinkampani ziqala ukukhetha i-Instagram njengokubheja okuluncedo kwintengiso.
Ukwenza imikhankaso elungileyo kwaye uthathe ithuba Iintengiso ze-Instagram ubuninzi kufuneka wazi ezona mpawu ziphambili. Kodwa kuqala siza kuchaza ukuba kutheni ukhetha i-Instagram hayi enye inethiwekhi.
1 Kutheni ukhetha i-Instagram?
2 I-Instagram ad typologies
3 Iinjongo zephulo lakho
4 Iingcebiso zokwenza iintengiso zakho kwi-Instagram
5 Vavanya iziphumo zentengiso yakho
Kutheni ukhetha i-Instagram?
Elinye lamaqonga ane ukukhula okungakumbi kule minyaka yangoku. Phakathi kwezonxibelelwano zentlalo sifumana i-Instagram njengenye yezona ziphambili, eSpain zikhona ngaphezulu kweshumi elinesibini lezigidi abasebenzisi abasebenzayo. Eli nani lisixelela ukuba liya kusinika i unamandla yobunzima.
Kuyinyani ukuba intengiso kwi-Instagram ekuqaleni yayingazi ngokupheleleyo ukuba ingayilunga njani. Amanqaku ayenokubakho ngokusebenzisa abachaphazeli. Kwiinyanga ezidlulileyo iguqukile kwaye nge ifomathi yokubonakalayo kunye neqhinga. Iimpawu ziye ifumene impumelelo ekufikeleleni kubantu ekujoliswe kubo.
La abaphulaphuli esibhekisa kubo bancinciUluhlu lobukho obukhulu luphakathi kweminyaka eli-19 ukuya kwengama-25. Akufanele sicinge ukuba akukho bantu badala, enyanisweni, abasebenzisi abaninzi nangaphezulu abangaphezulu kweminyaka engama-30 ubudala bajoyina.
Malunga nomxholo, lelinye lamaqonga aguquka kakhulu. Iqale kuphela ngokunikezela ngokubanakho ukuxhoma iifoto, ifomathi yayo yayiyisikwere kwaye iifilitha zinokusetyenziswa. Emva kwexesha ibandakanye ividiyo, ikwazi ukulayisha ngaphezulu kwesinye sefoto ngokungathi yi-albhamu, iye yaguquguquka ngakumbi kwifomathi yesayizi yomfanekiso, i amabali, phakathi kolunye utshintsho oluninzi.
I-Instagram ad typologies
Kubalulekile ukuba uqaphele iindlela ezahlukeneyo esivunyelwe ukuba sizenze kwinethiwekhi yoluntu. Iindidi zeentengiso zezi zilandelayo:
Intengiso enye yefotoOko kukuthi, ziintengiso ezibandakanya ifoto.
Iintengiso zevidiyo, kule meko inkxaso yethu iphelele ngakumbi.
Ulandelelwano lweeNtengiso, bubomi bemifanekiso okanye iividiyo, kwaye siza kubusebenzisa xa kufuneka sibonise iimveliso okanye iinkonzo ezahlukeneyo.
Iintengiso zamabali, le fomathi isandula ukugqiba amava ethu ephulo. Kuya kufuneka sikhumbule ukuba ifomathi ngokobungakanani kunye nexesha lexesha lahlukile. Kufuneka zime nkqo kwaye zingadluli kwimizuzwana eli-15.
Iinjongo zephulo lakho
Phakathi iinjongo ezahlukeneyo esinokuyiphumeza kwiintengiso ze-Instagram sinokuqaqambisa oku kulandelayo:
Fumana izithuthi. Xa sithetha ngezithuthi sithetha ukufumana utyelelo ngakumbi kubasebenzisi kwiakhawunti yethu. Intengiso iya kuthumela abaphulaphuli ekujoliswe kubo kwiwebhusayithi yethu.
Ukwanda kwintsebenzoOko kukuthi, ukwandisa ukubonakala kwethu kwaye sigqibe ukufumana ingxelo ngezinto eziphilayo ezivela kwezinye iiposti zethu. Kule meko, umsebenzisi uphela enomdla kumxholo wethu.
Inguquko, xa sifuna umsebenzisi ukuba enze into efana nokuthengwa kwemveliso, ukukhuphela usetyenziso, umrhumo kwincwadana yethu, njl.
Iingcebiso zokwenza iintengiso zakho kwi-Instagram
Ukuze uphumelele ngakumbi siza kukuxelela ezinye tips kwaye ngale ndlela, fezekisa iinjongo zakho zobungcali. Ukwenza iintengiso zakho sebenzisa ifayile umphathi wentengiso apho unokwenza iintengiso ngendlela elula ngakumbi kunokuba ucinga. Sebenzisa esi sixhobo izakuvumela ukuba wenze ezinye iintlobo zemikhankaso ezingafumanekiyo ngeapp. Uya kuthi Chaza abaphulaphuli ujolise kubo, ke, iyakuvumela ukuba ufikelele kubaphulaphuli abathile kunye nabanjengabo. Yonke idatha iya kugcinwa kwaye unokwenza uthelekiso, phawula umda, ukusebenzisana, ukubala ukuveliswa kwakhona, phakathi kwezinye izibonelelo.
Abantu abaphethe i-icon ye-Instagram
Vavanya iziphumo zentengiso yakho
Emva kokumiliselwa kwephulo kubalulekile Hlalutya iziphumo ezifunyenweyo. Ukusuka kumlawuli wakho uya kuba nakho ukufikelela kuzo zonke iigrafu zokulinganisa iziphumo. Oku izakuvumela ukuba uthathe izigqibo ezizayo ngokokumiselwa kweenjongo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Intengiso yakho yokuqala kwi-Instagram